Mpanamboatra sy mpamatsy rafitra firafitra vy - Orinasa rafitra firafitra vy China
Fampisehoana ampahany ny vokatra avy amin'ny orinasa Miaraka amin'ny fampivoarana ny siansa sy ny teknolojia, ny fampiharana ny firafitra vy amin'ny injenieran'ny fananganana eto amin'izao tontolo izao dia mihalehibe hatrany. Welding dia teknolojia fanodinana tena manan-danja amin'ny famokarana vy. Araka ny antontan'isa avy amin'ny firenena indostrialy, ny vy ampiasaina raha tsy aorian'ny fametahana vy dia 45% eo ho eo ny vokatra vy isan-taona. Tamin'ny faran'ny taona 1980, ny firafitra vy vita amin'ny vy dia 30% n'ny s ...
Fampidirana Herin-teknika an'ny orinasa: manana endrika 7 ny orinasa, mpamorona firafitra 3, mpamorona mari-trano 2 ary mpamorona rano sy herinaratra 1, ny telo amin'izy ireo dia niasa tao amin'ny institiota famoronana nandritra ny 3 taona mahery. Amin'ny indostria matihanina mifanaraka amin'izany, ny androm-piainan'ny mpamorona farafahakeliny dia dimy taona, ary ny androm-piainan'ny mpiasa farany ambony dia nahatratra 13 taona. Ny biraon'ny famokarana ataon'ny orinasa dia manana mpamorona lalindalina vy; Ny departemantan'ny injeniera ...